प्रचण्डले भने: कहिले मरिन्छ भन्ने त्रास भयो - Hulaki Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रचण्डले भने: कहिले मरिन्छ भन्ने त्रास भयो
प्रचण्डले भने: कहिले मरिन्छ भन्ने त्रास भयो
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गर्दा आफूहरु छिटै मरिन्छ भन्ने भन्ने त्रास भएको बताएका छन् ।सुरेश वाग्लेको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।कार्यक्रममा जनयुद्धका बेला मर्नका लागि तछाडमछाड भएको बताए । त्यसपछि सहिदको संख्या बढेर गएको बताए ।“को बाँचिन्छ को मरिन्छ त्यसबेला ठेगान थिएन,” दाहालले भने,“ त्यसबेला हामी केन्द्रीय समितिमा १९ जना थियौं । हामीमध्ये धेरै छिटै मारिन्छौं भन्ने लागेको थियो । विद्रोहलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ तर हाम्रो बौद्धिक तागतले राज्यसँग लडेर छिट्टै जित्न सकिन्छ भन्ने थिएन ।
त्यसैले पनि नेतृत्व सबै बाँकी राख्ने भन्ने हुँदैन । नेतृत्वपंक्तिबाटै बलिदान हुनुपर्छ भन्ने थियो ।”प्रचण्डले वाग्लेको हत्यापछि सहिद हुन तछाडमछाड भएको बताए । प्रचण्डले अहिले केही व्यक्तिहरुले यसरी प्राप्त भएको उपलब्धिको बदनाम गर्न लागिपरेको बताउँदै उनीहरु सफल हुन नसक्ने धारणा राखे । “उपलब्धिको बदनाम गर्नका लागि सिलसिला सुरु गरेका छन्,” दाहालले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्नका लागि लागिपरेका छन् हामी सफल हुन दिँदैनौं । सरकार प्रभावकारी होस् भन्ने चिन्ता हामीले पनि सुनेका छौं । राम्रा काम गर्न नखोजिएको होइन, आकांक्षाअनुसार काम भएनन् भन्ने कुरा आएको छ ।”
उनले पार्टी एकताका सबै काम पूरा हुन लागेको जानकारी गराउँदै देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम लगेर देशभर अपील गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताए । “हामी एकतावद्ध हुनुको विकल्प छैन,” दाहालले भने, “सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाएर गणतन्त्र उल्ट्याउन कुनै पनि हालतमा दिइने छैन ।”
इमान्दार ट्याक्सी चालक सुरेश जसले ट्याक्सीमै छुटेको ५ तोला सुन फिर्ता गरे !
वैशाख २३ गते नेपाल बन्दको आह्वान, विज्ञप्तिसहित
राजिनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, को बन्छ नया प्रधानमन्त्री ? यस्तो छ वास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस )
सिन्धुलीमा दिनदहाडै बन्दुक देखाएर १२० तोला सुन लुटपाट
पुर्जा भएको जमीन भारतीयको कब्जामा हुँदा पनि सरकार किन मौन … (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)